Tag: pr | Martech Zone
B2B Content Marketing Statistics ye2021
NeChishanu, Kurume 18, 2022 NeChishanu, Kurume 18, 2022 Douglas Karr
Elite Content Marketer yakagadzira chinyorwa chinonzwisisika chakazara nezve Content Marketing Stats iyo bhizinesi rega rega rinofanira kugaya. Iko hakuna mutengi watisingasanganisire zvekushambadzira zvemukati sechikamu chehurongwa hwavo hwese hwekushambadzira. Icho chokwadi ndechekuti vatengi, kunyanya bhizinesi-kune-bhizinesi (B2B) vatengi, vari kutsvaga matambudziko, mhinduro, uye vanopa mhinduro. Raibhurari yezvemukati yaunogadzira inofanirwa kushandiswa kupa zvese zvinodiwa kuti uvape mhinduro zvakare
NeChishanu, Kurume 11, 2022 NeChishanu, Kurume 11, 2022 Douglas Karr
Kunyangwe tanga tichinyora nezvekushambadzira zvemukati kweanopfuura makore gumi, ndinofunga zvakakosha kuti tipindure mibvunzo yakakosha kune vese vadzidzi vekushambadzira pamwe nekusimbisa ruzivo rwakapihwa kune vane ruzivo vatengesi. Kushambadzira kwemukati inguva yakawedzera inovhara toni yepasi. Izwi rekuti kushambadza zvemukati rave tsika muzera redhijitari… Handichayeuke nguva apo kushambadzira kwanga kusinei nezvainodyidzana nazvo. Of
Matanho gumi Ekutarisira Dambudziko Rekutaurirana
Muvhuro, September 21, 2020 Chipiri, Gunyana 22, 2020 Jenn Lisak Golding
Wati wambosangana nedambudziko rine chekuita nekambani yako here? Zvakanaka, hausi wega. Dambudziko rekutaurirana rinogona kukurira - kubva kunonoka kupindura kune zvaunofanirwa kutaura kune ese ezvemagariro kutaurwa kuri kuuya kuzotarisa kuti kana iri chaiyo dambudziko. Asi pakati penyonganiso, zvinogara zvakakosha kuve nehurongwa. Isu takashanda pamwe needu enharaunda yekutarisisa chikuva vanotsigira
Yekupedzisira Nhungamiro yekuvaka Yako Dhijitari Kushambadzira Strategic
Muvhuro, July 29, 2019 Muvhuro, July 29, 2019 Roman Kumar Vias
Vashoma kwazvo vanofunga kuti nzira inoshanda yekushambadzira inogona kudzora mutengo wekushambadzira kusvika 70%. Uye hazvireve hazvo kuti zvinoda kusanganisira nyanzvi. Mune ino chinyorwa iwe unodzidza maitiro ekuita kumusika kutsvagisa wega, ongorora vakwikwidzi vako uye uone kuti vateereri vanonyatsodei. Zano rakangwara rinogona kudzora mutengo wekushambadza kubva pamamirioni mashanu emadhora pasi kusvika pa5-1 mamirioni. Izvi hazvisi zvekufungidzira, uku ndiko kureba kwedu
Nei Tisingamboiti Press Press Release Distribution Services Zvekare
Chitatu, Nyamavhuvhu 16, 2017 Chitatu, Nyamavhuvhu 16, 2017 Douglas Karr
Mumwe wevatengi vedu akatishamisa nhasi, vakatizivisa kuti vakasaina basa rePepanhau Rinoburitsa Distribution rakakurudzirwa nemumwe wevavakabatana navo kwavanogona kuendesa kuburitswa kwavo kune anopfuura 500 nzvimbo dzakasiyana. Ini pakarepo ndakagomera… heino chikonzero: Press Regedza Distribution masevhisi haamiriri izvo zvemukati zvaunosimudzira zvachose, nekudaro kunze kwekunge mumwe munhu achinyatsoteerera kune chaiwo mapepanhau, ivo havawanzo kuwanikwa mune yekutsvaga mhedzisiro. Dhinda Regedzo Distribution